WindowsHorumarinQalabyada WebkaTeleport Pro
Qeybta: Qalabyada Webka
Bogga rasmiga ah: Teleport Pro
Faallo ku saabsan Teleport Pro
Teleport Pro Xirfadaha la xiriira
CodelobsterIDE – tifatire si kor loogu qaado loona fududeeyo howlaha horumarka PHP. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tafatirto feylasha waxaana ku jira aaladaha shaqada raaxada leh ee koodhka.
Ku haboon qalab si ay u abuuraan oo ka soo dejisan bogagga web oo aan ogayn HTML. Software ka kooban yahay tafatiraha iyo set ka mid ah foom oo aad loogu diyaariyey shuqul fududeeyey walxaha.
editor text awood la set oo ah qaababka ugu leh shuqulka soo saar badan leh files qoraalka. software The waa inay awoodaan inay si weyn u dardar shaqada la files qoraalka.